सेयर - BikashNews
-- Select Category -- बैंक बीमा अर्थतन्त्र फिचर व्यापार पुँजीबजार वित्त लाभांश
२०७५ फाल्गुन २७ गते ५:३९
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित ३४ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । सोमबार सम्पन्न कम्पनीको ३४औँ वार्षिक साधारणसभाले बैंक सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम बैंकले आर्थिक वर्ष(आव) २०७४/७५ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत नगद र १२ प्रतिशत बोनस सेयर गरी सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले आव २०७४/७५ मा ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ हासिल गरेको थियो । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी ५०.२५ रुपैयाँ हासिल गरी आफ्नो वासलात विस्तार गर्दै १ खर्ब ६१ अर्ब पुर्याएको छ । हाल बैंकको संचालन मुनाफा ५ अर्ब ६५ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंककोे यस वर्षको संचालन मुनाफा र खुद मुनाफामा क्रमश ७.५२ र ७.५५ ले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । समीक्षा बर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयर पश्चात बैंकको पुँजी ९ अर्ब १ �...
२०७५ फाल्गुन २७ गते ३:३०
काठमाडौं । सोमबारको बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । आइतबार प्राविधिक समस्याका कारणले बजार खुलेकाे डेढ घण्टा मात्रै कारोबार भएको बजारमा सोमबार भने पुरा समय कारोबार भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक १४.२८ अंकले बढेर ११४२ अंकमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.२६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । केहि समययता १५ देखि ३० करोडको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको बजारमा सोमबार भने ४० करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका छन् । कुल १७१ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा १३ लाख ४७ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएका छन् । जसमध्ये ६ वटा वाणिज्य बैंकहरु सबैभन्दा बढी कारोबार गर्नेको सूचिमा परेका छन् । रकमका अधारमा सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको...
२०७५ फाल्गुन २७ गते १२:३३
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले जारी गरेको ‘१०.५ प्रतिशत एसबीएल ऋणपत्र २०८२’ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । उक्त ऋणपत्र सूचिकृत भएसँगै बोण्डधनीहरुले ‘९ प्रतिशत एसबीएल ऋणपत्र २०८२’ को २१ लाख ६२ हजार ५५९ कित्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै, नेप्सेमा सानिमा बैंकले जारी गरेको ‘१० प्रतिशत सानिमा ऋणपत्र २०८५’ सूचिकृत भएको छ । यससँगै कम्पनीका बोण्डधनीहरुले ‘१० प्रतिशत सानिमा ऋणपत्र २०८५’ को १३ लाख ५४ हजार ७१२ कित्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । साथै, यी दुई कम्पनीहरुको गरी कुल ३५ लाख १७ हजार २७१ कित्ता ऋणपत्र सोमबार नेप्सेमा थपिएको हो । ...
२०७५ फाल्गुन २३ गते ३:२५
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । करिब दुई दिनयता सामान्य अंकले बढिरहेको बजार बिहीबार १६ अंकले उकालो लागेर ११२७ अंकमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.४४ प्रतिशतले बढेको हो । बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ । बिहीबार २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ७ करोड रुपैयाँ बढी हो । बुधबारको बजारमा कुल २२ करोडको कारोबार भएको थियो । कुल १७६ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा विभिन्न ४ वटा कम्पनीको करोडौंको सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) को एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्शियल बैंकको एक करोड २८ लाख, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको एक करोड ७ �...
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा चैत १५ गते, कहिलदेखि बुक क्लाेज ?
२०७५ फाल्गुन २३ गते १:४४
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३०औं वार्षिक साधाधारण सभा चैत १५ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि चैत १ गतेदेखि चैत १५ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुँदै छ । उक्र सभाले संचालक समितिको प्रस्तावबमोजिम चुक्ता पुँजीको १३.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । साथै, बोनस सेयर बापत कर प्रयोजनको लागि एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश स्वीकृत गर्दै छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १३.५ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । ...
सेयर बजारमा छायो हरियाली, नेप्से ९ अंकले बढेर ११११ अंकमा
२०७५ फाल्गुन २२ गते ३:२७
काठमाडौं । निरन्तर गिरावटले राताम्मे भएको बजार बुधबार भने बढेर हरियो देखिएको छ । सो दिन नेप्से ९.१२ अंकले बढेर ११११.७६ अंकमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.८३ प्रतिशतले बढेको हो । परिसूचक बढेसँगै कारोबारमा आएका सबै सूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह ९६.१४ अंकले बढेर ५७४४ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा समूह ६७.५६ अंक, होटल २५, माइक्रोफाइनान्स १९ र विकास बैंक १० अंकले बढेको छ । सो दिन कुल १६९ कम्पनीको २२ करोड ४६ लाख ६६ हजार १२८ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी एनसीसी बैंकको एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंकको एक करोड ३६ लाख, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एक करोड १७ लाख र एनएमबि बैंकको एक करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी हाथ...
Sen. Float 1.7196